FANDATSAHAN’AINA AN’I GAEL TENY 67 HA : Tratra tao Toliara i Jibril izay nahavanon-doza
Raha toa ka efa ela nokarohina i Jibril, ilay lehilahy tompon’antoka tamin’ny famonoana ho faty an’i Gael teny amin’ny manodidina an’i 67 ha, ny volana desambra 2017 lasa iny dia tra-tehaka ihany ity farany. 9 juillet 2019
Tonian’ny mpampanoa lalàna tao Toliara no nahatsikaritra ny lehilahy ary voamarina tamin’ny fikarohana natao rehetra toy ny tahirin-tsariny. Niandrasana kendry tohana ity farany ka voasambotry ny zandary ny faha 12 jona 2019 lasa teo. Nandritra ny fanadihadiana natao azy dia voaporofo tokoa fa ity lehilahy ity no tompon’antoka tamin’io vono olona io. Niaiky ny heloka vitany izy ka taorian’izay dia nadoboka am-ponja tao Toliara.
Raha ny loaharanom-baovao voaray hatrany anefa dia fantatra fa hafindra ao amin’ny fonjan’i Tsiafahy i Jibril ato ho ato ary efa eo am-pikarakarana izany ny tompon’andraikitra. Manoloana ity tranga ity ihany koa anefa dia nisy ny resaka mandeha fa misy mpandraharaha iray avy any amin’ny Faritra Sava iny izay mitady ny fomba rehetra hamotsorana ity nahavanon-doza ity. Manohy ny fiambenana sy ny fikarohana lalina moa ny mpitandro filaminana hatreto mahakasika ity tranga ity.
Raha tsiahivina kely ny zava-nitranga tamin’ny fisehoan’ny loza dia novonoin’i Jibril tamin’ny fomba mahatsiravina teny akaikina toerana fisotroana zava-pisotro mahamamo iray ao 67 ha i Gael ary notsindrominy tamin’ny tavoahangina labiera ny faritra misy ny tendany ka namoy ny ainy teny amin’ny hopital HJRA. Tafatsoaka ny nahavanon-doza taorian’izay saingy izao tratra izao roa taona aty aoriana. Tsara ny manamarika fa efa namono olona maro hafa ihany koa i Jibril ka anisan’izany tanora iray tany Sambava tamin’ny taona 2014.
Tatianà R. sy A.Lepêcheur